Overhead ပြင်ပလုံခြုံရေးတံခါးမွမ်းမံ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Overhead ပြင်ပလုံခြုံရေးတံခါးမွမ်းမံ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Overhead ပြင်ပလုံခြုံရေးတံခါးမွမ်းမံ ထုတ်ကုန်များ)
လူမီနီယမ်အလွိုင်းအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းစက်မှုအဆင့်မြှင့်တံခါး အဆိုပါဈတံခါးကို pane ထဲကတစ်ဦးစီးရီးရေးစပ်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုသည်, ပုဒ်တလျှောက်တွင်ဓာတ်လှေကားအဆင့်မြှင့် ndustrial ။ စတိုင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းပြီးချောမွေ့လိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူကိုသာယာသောခံစားချက်ပေးသည်။...
စက်မှု overhead ပုဒ်မတံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် စက်မှုလုပ်ငန်း overhead sectional တံခါး (ဒေါင်လိုက်မြှင့်တံခါးကို, ကားဂိုဒေါင် sectional တံခါးကို) ဒီနေ့ခေတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာဖြစ်လာသည်။ မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုသင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် (သို့)...
လူမီနီယမ်အလွိုင်း overhead အပိုင်းတံခါး
မြန်နှုန်းမြင့် Cold Storage Door Overview overhead sectional industrial door (overhead lifting up, Vertical lifting door) သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ သင်၏ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းတွင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။...
Transparent Window အတူ overhead အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး
Transparent Window အတူ overhead အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး တံခါးကို pane ထဲက, ထိုအပုဒ်တလျှောက်တွင်ဓာတ်လှေကားတစ်ခုစီးရီးရေးစပ်စက်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို။ စတိုင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းပြီးချောမွေ့လိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူကိုသာယာသောခံစားချက်ပေးသည်။...
overhead Rapid တာဘိုင်ခက်သတ္တု Rolling တံခါး
overhead Rapid တာဘိုင်ခက်သတ္တု Rolling တံခါး မြန်နှုန်းမြင့်လိမ်တံခါးကို၏အင်္ဂါရပ်ကဘာလဲ? စံပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အပြတင်းပေါက်ကြည့်ရှုအတူ 1)...
အော်တို overhead အပိုင်းတံခါးကို
စက်မှု overhead ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို
Supply နိုင်ခြင်း: 300 Set/Sets per Month Sectional Industrial Steel Automatic Warehouse Door
စက်မှု overhead ကားဂိုဒေါင်တံခါးကို အဆိုပါ အတွင်းစိတ်နဲ့အပြင်ဘက်ကို double သံမဏိတံခါးကိုပုံသွင်းမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်း polyester မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကုသမှုနှင့်အတူစက်မှု overhead ကားဂိုဒေါင်တံခါး, polyurethane insulator တွင်လည်း, 40-50mm ၏တံခါးကိုအထူ, အစိုင်အခဲ, insulator တွင်လည်း, အပူလျှပ်ကာ, ဖုန်မှုန့်-သက်သေပြ,...
ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ overhead အပိုင်းတံခါး
အလိုအလျောက်စက်မှုအဆင့်မြှင့်တံခါးများ ရုတ်သိမ်းတံခါးတံခါးကို panel ကထိုကဲ့သို့သောအရောင်သံမဏိပြားများနှင့်လူမီနီယံပြားအဖြစ်သတ္တုပြား၏ဖန်ဆင်းသည်, ထိုသူအချို့တို့သည်အများအားဖြင့်ဂိုဒေါင်တံခါးများအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ပစ္စည်း polyurethane သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများ, ကာကှယျနှင့်အတူတည်ရှိနေပေမယ့်နေကြသည်။...
overhead ပုဒ်မကားဂိုဒေါင်တံခါးကို အတွင်းစိတ်နဲ့အပြင်ဘက်ကို double သံမဏိတံခါးကိုပုံသွင်းမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်း polyester မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကုသမှုကြာရှည်ခံမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်စီးပွားရေးထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာ applications များကျေနပ်အောင်မှရရှိနိုင်သည့် polyurethane insulator တွင်လည်း,...
အထိုင်အတွက် overhead အပိုင်းတံခါးကို
overhead အပိုင်းတံခါးကိုလုပ်ကိုင်ရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည် beacuse လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အတော်များများဖောက်သည်, သူတို့ရဲ့ဂိုဒေါင်များအတွက် overhead အပိုင်းတံခါးကိုရွေးပါ။ ထိုသို့အဖြစ်ကောင်းစွာစီးပွားရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံသည်။ စက်မှုပုံသွင်းအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက် doble သံမဏိတံခါးကိုမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်း...
မီးဘူတာရုံ, ပုံသွင်းအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက် doble သံမဏိတံခါးကိုမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်း polyester မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကုသမှုနှင့်အတူ polyurethane insulator တွင်လည်း, 40-50mm ၏တံခါးကိုအထူ, အစိုင်အခဲ, insulator တွင်လည်း, အပူလျှပ်ကာ, ဖုန်မှုန့်-သက်သေပြ, လေတိုက်ယဉ်, ရထားနှင့်ပြည့်စုံအလယ်မှာအပိုင်းတံခါးကို overheasd...
စက်မှုပုံသွင်းအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက် doble သံမဏိတံခါးကိုမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်း polyester မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကုသမှု polyurethane insulator တွင်လည်းနှငျ့ပွညျ့စုံအလယ်မှာ, 40-50mm ၏တံခါးကိုအထူ, အစိုင်အခဲ, insulator တွင်လည်း, အပူလျှပ်ကာ, ဖုန်မှုန့်-သက်သေပြ, လေတိုက်ယဉ်, ရထားလမ်းမွေးစားအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးအတူတံခါးကိုလျှော...
Overhead ပြင်ပလုံခြုံရေးတံခါးမွမ်းမံ overhead ပြင်ပလုံခြုံရေးတံခါးမွမ်းမံ overhead အပိုင်းလုံခြုံရေးတံခါးမွမ်းမံ overhead လုံခြုံရေးတံခါးမွမ်းမံ သံမဏိလုံခြုံရေးတံခါးများ ပြင်ပအပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါးမွမ်းမံ အရောင်သံမဏိလုံခြုံရေးတံခါးဆွဲယူ လူမီနီယမ်လုံခြုံရေးတံခါးများ